မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ | Join4Biz
ငါအဘယ်ကြောင့်, မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ငါ၏အ account ကို login မဟုတ်နိုင်သလဲ
သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အကောင့်ကို activate လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အကောင့်ကိုသက်ဝင်ဘို့အဘယ်သူမျှမကအီးမေးလ်လည်းမရှိလျှင်, သင်၏အီးမေးလျ box ကို Check, သင့်ကို spam folder ကိုစစ်ဆေးပါ။
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုစာမျက်နှာမှာ, သင့်ကိုပြသနာမကိုအမှီအောက်မှာ "Edit Profile" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါနောက်စာမျက်နှာမှာစာမျက်နှာ၏လက်ဝဲဘက်အောက်ခြေတွင် "Profile picture" (စကားတို့ကိုမအလွတ်ဧရိယာကိုကလစ်နှိပ်ပါ) ကိုကလစ်နှိပ်ပါကသင်သည်ယခုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံကို upload လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုစာမျက်နှာ၏အလယ်တွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ "FAV Ads" နှင့် "Package" အကြား "MESSAGES များ" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ထို့နောက် "ရရှိထားသည့်ကမ်းလှမ်းချက်များ" ကိုနှိပ်ပါ, ကြော်ငြာခေါင်းစဉ်ကို select, သင်သည်ဤကြော်ငြာများအတွက်ယခင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကိုအခမဲ့ကြော်ငြာ post မပေးနိုင်သလဲ
အားလုံးမှတ်ပုံတင်ပြီးအဖွဲ့ဝင်များအခမဲ့တယောက်ကြော်ငြာ post နိုင်ပါတယ်။ စနစ်အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့မူကြမ်းကြော်ငြာသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်း, ထိုငျသညျသစ်တစ်ခုကြော်ငြာ post လို့မရပါဘူး။ သင်သည်သင်၏ယခင်မူကြမ်းကြော်ငြာတည်းဖြတ်ကြောင့်ထုတ်ဝေဖို့ရှိသည်။ ပရိုဖိုင်းကိုစာမျက်နှာမှာသင်၏ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအောက်မှာ "MY Ads" ကိုနှိပ်ပါ, သင်သည်သင်၏မူကြမ်းကြော်ငြာမြင်လိမ့်မည်။ တည်းဖြတ်နှင့်ကြော်ငြာတင်သွင်းဖို့ "Edit ကိုကြော်ငြာ" ကိုနှိပ်ပါ။
ပရိုဖိုင်းကိုစာမျက်နှာမှာသင်၏ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအောက်မှာ "MY Ads" ကိုနှိပ်ပါ, သင်သည်သင်၏မူကြမ်းကြော်ငြာမြင်လိမ့်မည်။ တည်းဖြတ်နှင့်ကြော်ငြာတင်သွင်းဖို့ "Edit ကိုကြော်ငြာ" ကိုနှိပ်ပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက် 100% သည်အခမဲ့လား?
ဒါဟာအကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီအကောင့်တစ်ခုကြော်ငြာ post နှင့်ကြော်ငြာ3ကြိမ်အထိဝင်တိုးဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ (အင်္ဂလိပ်လို) ကိုကြော်ငြာနဲ့အခြား 35 ဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ထားသောခံရဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျးကိုပိုမို features တွေပူဇော်ဖို့, အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
ကြေးပေးသွင်း packages များအဘို့ငွေပေးချေမှုလုပ်ဖို့ကစိတ်ချရသနည်း
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငွေပေးချေမှုစေရန်ဘေးကင်းလုံခြုံသည်နှင့်သင် paypal မှတဆင့်ပေးဆောင်နေကြပါတယ်။
ကျွန်မအစားအင်္ဂလိပ်၏အခြားဘာသာစကားများ၌ငါ့ကြော်ငြာ post နိုင်သလား?
အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေတဲ့အထူးအသားပေးကြော်ငြာ '' featured '' ရှိနေဆဲကြမည်နည်း
တစ်ဦးကအထူးအသားပေးကြော်ငြာ 30 ရက်ပေါင်းတစ်ကာလအတွင်း '' featured '' ရှိနေပါဦးမည်။ 30 ရက်အကြာမှာ, သင်ဆဲအားလုံးကြော်ငြာများ၏စာရင်းအတွက်ကြော်ငြာရှာတှေ့နိုငျသျောလညျးသငျအထူးအသားပေးကြော်ငြာများ၏စာရင်းထဲမှာမတှေ့နိုငျပါသညျ။
အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို '' ကြော်ငြာတက်ဝင်တိုး '' သနည်း?
ငါငွေပေးချေစေပြီးနောက်, သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအတည်ပြုခြင်းနှင့်ငါ့ကို paid အထုပ်ပါစေနိုင်သနည်း
ငွေပေးချေမှုရမည့်သင်သည်သင်၏ပေးဆောင်အထုပ်ရဲ့ features တွေကိုခံစားနိုင်, သင်ငွေပေးချေရာ၌ခန့်ထားပြီချက်ချင်းပြီးနောက်အလိုအလျောက်အတည်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။